Home XAALADAHA FOOTBALLADA EE QARANKA Ciyaartoyda Kubadda Cagta Ingariiska Sheekada Carruurnimada Brandon Williams Plus Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Untold
LB wuxuu soo bandhigayaa Sheekadii oo dhameystiran oo Kubadda Cagta ah oo loo yaqaan "Nickname"bran". Sheekadeena Taariikhda Caruurnimada Brandon Williams ee Dheeraadka Untold Biography Xaqiiqooyinka ayaa kuu keenaya xisaab buuxa oo ah dhacdooyin caan ah laga soo bilaabo waqtigiisa carruurnimada ilaa taariikhda.
Haa, qof walbaa wuu ogyahay inuu yahay daafaca bidix ee geesinimada, jir ahaanta iyo waqtiga qoraalka, qarka u saaran inuu barakaco Luke Shaw iyo Young. Si kastaba ha noqotee, kaliya tiro yar oo ka mid ah taageerayaasha kubbadda cagta ayaa tixgeliya noocayaga 'Brandon Williams' Biography oo aad u xiiso badan. Hadda bilaa camal dheeraad ah, aan bilawno.
Sheekada Carruurnimada Brandon Williams iyo Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeedka ee Untold - Asalka Qoyska iyo Nolosha Hore
Brandon Paul Brian Williams wuxuu ku dhashay 3rd ee Sebtember 2000 waalidkiis oo ku nool magaalada Manchester, United Kingdom. Kubbad sameeyaha, oo ka soo jeeda xididdada qoyska Ingiriiska ee Caddaan, wuxuu ku dhashay waagii hore ee millennium cusub, sannadka (2000) halkaas oo carqaladeyn xagga teknolojiyadeed ah sidii hore loo sheegay inay dhici doonto- run ahaantii waligood ma dhicin.
Brandon Williams wuxuu dhashay sanadka 2000, sanadka aduunka, runti waligiis ma dhamaan oo saadaasha oo dhan waxaa loo arkay inay been tahay. Sumcada Sawirka: BBC, Instagram iyo Amazon
Runta sheeg! Sanadkaas 2000 markii uu Brandon ku dhashay, weligeed ma jiri jirin a Y2K, (cayayaanka kunka sumcad leh). Xaqiiqdii, Diyaaradaha sida la saadaaliyay waligood cirka kama soo dhicin. Xitaa gantaalada si lama filaan ah dab uguma shidin isla markaana dib u dajinta taariikhiga ah ee taariikhaha kumbuyuutarrada waligood ma dhicin. Jiritaan la'aanta dhacdooyinkan saadaalinta leh ee la saadaaliyay waxay soo bandhigeen caawimaad weyn waalidiinta Brandon Williams.
sida Marcus Rashford, Brandon Williams wuxuu qoyskiisu asal ahaan ka soo jeedaa magaalada weyn ee Manchester. Tani waa magaalo leh dhaxal aad u baaxad weyn oo Sportin ah, waxaana ugu muhiimsan, oo lagu calaamadeeyay inay tahay mid ka mid ah meelaha ugu nool ee Yurub lagu sii joogo. Haddii aad raadineyso casho qadada, bar-ka-iibinta khamriga, dhaqanka 'dhab aleBarxadda, ama meel lagu cayaaro habeenka fog, magaalada Manchester (sawirka hoose) ayaa leh dhammaantood.
Brandon Williams wuxuu asal ahaan ka soo jeedaa qoyskiisa magaalada weyn ee Manchester, England. Amaah: BooqoManchester
Xiddiga Man United wuxuu ku koray guri dabaq ah oo qoys ah. Brandon's Waalidku waxay la mid yihiin inta badan celcelis ahaan muwaadiniinta reer Manchester ee iyagu qabta shaqooyin dhexdhexaad ah laakiin aan lahayn waxbarashada dhaqaalaha ugu fiican. Qoysku waxay ku noolaayeen guryo dakhligoodu hooseeyo oo ah meel culayskoodu ka yaraaday howlaha kubbadda cagta.
Sheekada Carruurnimada Brandon Williams iyo Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeedka ee Untold - Waxbarashada iyo Xirfadaha Dhiso
Ma ogtahay… Wiil kasta oo maxalli ah oo ka soo jeeda Manchester bilowga noloshooda waa inuu doortaa haddii iyagu waa a GUDAHA OR FARSAMO NOLOSHIISA (Sky Blue)?.
Brandon Williams - sida ilmo kale oo ku koray Manchester wuxuu ka jawaabay Su'aasha Casaanka iyo Cirka-buluugga ah. Astaanta Sawirka: Twitter
Kajawaabida su'aasha waa lama huraan maxaa yeelay runtii waxba kama jiraan inaad reerka kahesho meel ka baxsan magaalada. Ilaa iyo inta cagahaagu ku yaalyo Manchester, waxaa lagaa filayaa inaad jawaab ku hesho su'aasha. Mar labaad, adoo ka jawaabaya su'aasha, waa inaad duceysataa in jawaabtaadu aysan noqon meel aan munaasabad ahayn, sida xulashada naadiyo dhexdhexaad ah tusaale; Rochdale, Bolton Wanderers ama Wigan.
Marka loo eego Brandon Williams, jawaabtu waxay ahayd mid fudud- 'Manchester United ', naadi dhamaan xubnaha qoyskiisa ay taageereen. Wuxuu caawiyaa inuu yahay taageere kubbada cagta ciyaara ciyaarta marmarka qaarkood waqtiga iskuulka kadib, Brandon yari wuu ogaa inuu leeyahay karti uu magac ugu yeesho kubada cagta. Markii uu yaraa, wuxuu bilaabay inuu ku riyoodo inuu isku arko akadeemiga United.
Si uu uga shaqeeyo dariiqiisa heerarka akadeemiyadeed, daafaca bidix ee adag wuxuu bilaabmay ciyaarta oo si habsami leh uga ciyaareysa garoonnada maxalliga ah ee Manchester. Waqti dheer ma uusan helin ka dib markii aqoonsi ay ka heleen kooxda indha indheeyayaasha Man United ee casuumay tijaabooyinka naadiga. Sharafta waalidkiis Brandon Williams iyo xubnaha qoyskaba ma oga xadku marka uu ka gudbo tijaabooyinka oo laga aqbalo akadeemiyada United.
Sheekada Carruurnimada Brandon Williams iyo Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeedka ee Untold - Nolosha Mudnaanta Hore
Fahmitaanka wiilkooda rabitaankooda kubbadda cagta nololeed, waalidiinta Brandon Williams waxay sameeyeen wax kasta oo ay karaan si ay u taageeraan mustaqbalkiisa yar. Ma ogeyd?… Brandon wuxuu ku biiray United (da '6 da') waqti uu ku sugnaa shirkadda caymiska Mareykanka AIG kafaala qaaday funaanadaha kooxda iyo GOAT- C Ronaldo wuxuu ahaa ugu sarreeya awoodiisa.
Bilowgiiba, Brandon wuxuu ogaa inuu ubaahan yahay wax kabadan oo kaliya inuu haysto farsamo iyo hammi weyn si uu ugu guuleysto boosaska akadeemiyadeed ee aadka u adag ee kooxda. Waxay ahayd inuu adeegsado sirdoonka ciyaarta, maturity, tabaha jimicsiga jirka, iyo tan ugu muhiimsan, isagoo maskaxda saxda ah ka sareeya. Tani waxay aragtay wiilka maxalliga ah inuu ku guuleysto safka, isagoo sugaya jidkiisa kooxaha '23-team'.
Sheekada Carruurnimada Brandon Williams iyo Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeedka ee Untold - Waddada Weyn
Bilowga XilliX / 2017, Brandon waxaa loo dalacsiiyay kooxda Under-2018. AnigaWaqti badan kama qaadin inuu noqday wax ku soo barbaaray doorkiisii ​​qaan gaarka ee daafaca bidix. Abaal marin ahaan eexdiisa, qaan gaadhnimada iyo isku kalsoonida, Brandon Williams ayaa loo dhiibay kabtanimada kabtanka kooxda juunyeerka United inkastoo uu kaliya ahaa 18- maxaa guul u ah wiilka eyga badan.
Wadada 'Brandon Williams Road to Fame Story-' Balannimadiisa waxay keentay inuu noqdo hogaamiye. Astaanta Sawirka: TalkingBaws
Sheekada Carruurnimada Brandon Williams iyo Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeedka ee Untold - Kusoo caan bax
Ka faa’iideysiga Fursadda Bidix-gadaal: Iyadoo Luke Shaw u nugul dhaawacyada iyo Ashley Young isagoo aan ku jirin heerkiisii ​​ugu fiicnaa, Brandon wuxuu ku arkay daciifnimo booska daafaca bidix ee United wuxuuna isla markiiba bilaabay qorsheyaal lagu buuxinayo booskii gariirka.
Marka hore, Brandon on 30th of August 2019 wuxuu si guul leh ugu dagaallamay jidkiisa xulka England, horumarin kor u qaaday CV-yadiisa. Kadib, dhallinta bidix ee dhallintayar waxay bilaabeen inay iskudayaan qorshayaal ay ku doortaan macalinka Ole Gunnar Solskjaer iyo taageerayaasha United guud ahaanba. Sababtoo ah Brandon wuxuu ahaa ciyaaryahan maxalli ah oo ku dhashay kuna soo barbaaray Manchester (sida oo kale) Marcus Rashford), waxaa jiray waxoogaa jacayl saa'id ah xilligan uu ku dhexjiray goobta, isagoo bixiyay qaab ciyaareed cajiib ah.
Iyada oo xilligii Man United ee 2019 / 2020 uu sii waday inuu sii xumaado, waxaa jiray soo jiidasho sii kordheysa oo raadinta wax kasta oo soo bandhigi kara rajo wanaagsan. bidix-bidix. Soo bixitaankii Brandon Williams wuxuu noqday mid ka mid ah rajo beylaha kooxda maadaama uu xiddigii maxalliga ahaa waqti aanuu dhaliyay goolkiisii ​​ugu horreeyay ee Premier League ee uu ka dhaliyay Sheffield United bishii 24th ee November, 2019.
randon Williams ayaa dhaliyay goolkiisii ​​ugu horeeyay ee United kulankii ay barbaraha 3-3 ah la galeen Sheffield 24kii bishii Nofeembar 2019.
Guul laga gaaro sarakicintan meteoric runtii waa la arkay Luke Shaw iyo Ashley Young iyagoo ka baqaya in tartame sharci ah loogu tartamo kaalintooda bidix ayaa runtii timid. Waxay ubaahantahay waqti uun kahor intaan Brandon uu sheegasho buuxda kahelin doorka. Inta kale, sida ay yiraahdaan, hadda waa taariikh.
Sheekada Carruurnimada Brandon Williams iyo Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeedka ee Untold - Nolosha Xiriirka
Kordhintiisa caannimada iyo qaabka ciyaarta, waxaa hubaal ah in in badan oo ka mid ah taageerayaasha United ay ka fakireen ogaanshaha haddii Brendon Williams leeyahay gabadh ama xaas. Haa!… Ma beenineyso xaqiiqda ah inuu deganaansho deggan iyo muuqaal soo ururay Marka lagu daro qaabkiisa ciyaarta ma gelin karo qofka ugu sareeya liiska gabadha uu doonayo.
Taageerayaashu waxay la yaabeen haddii Brandon Williams leeyahay gabadh saaxiib ama xaas leh. Astaanta Muuqaalka: Instagram
Waqtiga qorista, waxay umuuqataa Brandon Williams inuu sameeyay dadaal dheeri ah oo aan ku siineynin wax macluumaad ah oo kusaabsan saaxiibtiisa. Si kastaba ha noqotee, waqtiga qoraalka, waxay umuuqataa inuu kaligiis noqon karo oo laga yaabo inuu raadsado gabadh. Haa !! Taasi waa run- sida lagu arkay qofka Zara McDermott. Haddaba aan wax yar kaaga sheekeeyo sheekada.
Qeexitaanka Qancinta Quruxda Zara McDermott: Wax yar kahor Brandon yoolkiisii ​​ugu horreeyay ee Horyaalka Premier League ee 24th ee Noofambar, 2019, websaydhka caanka ah ee Ingiriiska Mirror Waxay daabacday sheeko ku saabsan isaga oo tusaale u soo qaatay Zara McDermott oo qurux badan oo saaxiibo u ah xiddigta dhabta ah Sam Thompson.
Brandon Williams mar ayaa lagu eedeeyay inuu doonayo Zara McDermott inuu noqdo saaxiibtiis. Sumcada Sawirka: Instagram iyo Mirror
Warbixinta, Sam Thompson (kor ku sawiran oo leh cadeyntiisa dhijitaalka ah) wuxuu ku andacooday inuu qabtay Brandon Williams isagoo isku dayaya inuu la xiriiro saaxiibtiis Zara McDermott isagoo adeegsanaya barta Instagram. Quruxda badan ee Zara, in kasta oo ay saaxiib ku leedahay Sam, waxay umuuqataa iyadu inaysan ahayn gaaban ee ka-maqnaashaha. Yaa garanaya?… Zara waxaa laga yaabaa inuu udhacey Brandon Williams oo wuxuu noqon karaa saaxiibtiis (ama laga yaabee) inuusan waqti ku xirneyn.
Sheekada Carruurnimada Brandon Williams iyo Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeedka ee Untold - Naftaada Shaqsiga
Ka fogow dhammaan howlaha kubbadda cagta, ogaanshaha Brandon Williams 'Nolosha Shaqsiyadeed waxay kaa caawin doontaa inaad sawir wanaagsan ka hesho shakhsiyaddiisa. Bilaabidda, isagu waa nin qabow, deggan oo sawir leh. Kubadda cagta ka fog, inta badan waxaa laga helaa meelaha saxda ah, waligiis dhibaato kuma dhex galo wuxuuna garanayaa qayb ka mid ah ku noolaanshaha nolol faraxsan.
Brandon Williams Nolosha Shakhsiyeed ee ka fog Kubadda Cagta. Sumcada Sawirka: Instagram
Inbadan oo ku saabsan noloshiisa shaqsiyeed, Brandon wuxuu leeyahay qaab ku wajahan nolosha, midda oo hubineysa inaysan wax fursad uhelaan. Waa qof siiya dareen joogto ah oo ah inaysan jirin waqti ku filan oo loogu oggolaado fursad lumis markay tahay inuu albaabka garaaco. U tartamida daafaca bidix ee United ayaa runtii ah fursadii ugu weyneyd ee uu ku helo noloshiisa ilaa iyo haatan.
Sheekada Carruurnimada Brandon Williams iyo Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeedka ee Untold - Nolosha Qoyska
Brandon wuxuu ku hanweynahay barbaarintiisa iyo dhererka xubnaha qoyskiisa (oo ay ku jiraan qaraabada la sii daayay) ay gaareen isboorti, kaliya maahan kubbadda cagta. Ma ogeyd?… Qoyska Williams ayaa sidoo kale caan ku ah magaalada Manchester guulaha ay ka gaareen feerka markii loo mahadcelinayo ina adeerkiis Brandon- Zelfa Barrett oo xilligii wax qorayay, waa kan England. Super Feather-weight champion.
Brandon Williams wuxuu qaraabo la yahay tartanka Feerka Ingriiska Zelfa Barrett. Sumcada Sawirka: Instagram iyo Mirror
Sida kor ku xusan, qoyska Brandon Williams sidoo kale waxay leeyihiin qowmiyado madow oo British ah iyo xididdada qoysku ay ku sii jeedaan Afrika.
Sheekada Carruurnimada Brandon Williams iyo Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeedka ee Untold - nololeedka
Waqtiga qoraalka, Brandon waa kubadsameeye u ciyaara United, waa naadiga ugu weyn England. Isagoo ah kan ugu sareeya ciyaartiisa, shaki kuma jiro inuusan waligiis noqon doonin kubadsameeyaha. Hadda inaad barato qaab nololeedkiisa waxay kaa caawineysaa inaad hesho sawir wanaagsan oo heerka noloshiisa ah.
Brandon waxay ku nooshahay nolol habaysan oo ku taal Manchester, oo ah nolol aan lahayn kharash aan macquul ahayn. Waa qof ku hayaa baahiyo wax ku ool ah oo aan kharash badan ku fadhiyin. Waqtiga qoraalka, ma jiraan wax la mid ah baabuurta qalaad, guryo waaweyn oo si fudud ay u arki karaan dadka kubada cagta ee ku nool qaab nololeedka ololkooda.
Nolosha Hab-nololeedka Brandon Williams. Isagu wuxuu ka hortagayaa qaab nololeed qaali ah Amaahda: Express, Gm4u
Sheekada Carruurnimada Brandon Williams iyo Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeedka ee Untold - Xaqiiqooyin aan sax ahayn
Kubadbile aan macno lahayn: Lahaanshaha inaadeer walaalkiis waa feeryahan macnaheedu waa Brandon waa kubadsameeyaha jeclaan lahaa daqiiqado kulul. Haa, wuxuu si fudud u waayi karaa qabowgiisa wuxuuna ula falgali karaa kuwa ka soo horjeeda ee doonaya inay la dagaallamaan. Sida hoos ku xusan, qofna kuma qasbi karo wiilka maxalliga ah ee Manchester ma ahayn ku fiicnayn Maypay inuu ugu yeedho dagaal.
Brandon Williams- Difaac aan micno lahayn. Sawirka Sawirka: ManchesterEveningNews
Waa kii ugu yaraa ee dadka caanka ah ee 10 caan ah oo sita magaca Brandon Williams: Markaad ka raadinayso magaca "Brandon Williams" google, waxaad u egtahay inaad la kulanto magac ay leeyihiin dad caan ah. Sida laga soo xigtay Wikipedia, waxaa jira caanka kooxda 10 Brandon Williams oo kuwa aan iska leennahay ayaa ah kan ugu yar. Fiiri aqoonsiga 9 kale ee Brandon Williams marka loo eego Wikipedia.
Brandon Williams waa kan ugu yar 9 ka qof ee kale ee magac leh. Sumcada Sawirka: Wikipedia.
Hantida FACT: Waad ku mahadsan tahay aqrintayada Taariikhda Caruurnimada Brandon Williams ee Xaqiiqda Untold Biography. Ugu LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxsanaan iyo cadaalad. Haddii aad hesho wax aan sax ahayn, fadlan nala wadaag adigoo faallo ka bixinaya xagga hoose. Waxaan markasta qiimeyn doonnaa oo xushmeyneynaa fikradahaaga.
Daniel James Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha
Ole Gunnar Solskjear Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Wada-noolaanshaha
Victor Lindelof Sheeko dhalasho sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka sawir la'aanta
Eric Bailly Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha ee aan la isku qorin
Diogo Dalot Cartheel Story Sheeko Xaqiiqo Wada-hadal ah
Angel Di Maria Storyhood Sheeko Xogta Warka Xogta Leh